तमानखोला गाँउपालिकाको बजेट १७ करोड ९९ लाख::Online News Portal from State No. 4
तमानखोला गाँउपालिकाको बजेट १७ करोड ९९ लाख
बागलुङ, २५ असार-जिल्लाको तमानखोला गाँउपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइतवार ल्याएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम र भौगोलिक रुपमा कठिन मानिने तमानखोलाले ल्याएको कार्यक्रमले एक बर्ष भित्र शैक्षिक स्तर १० प्रतिशत बढाउने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले आर्थिक बिकास गर्ने लक्ष राखेको छ ।
मानव विकासको सुचकांक,लैङिक सशक्तिकरण,सामाजिक विभेद अन्त्य भएको गाउँपालिका र पूर्वाधारको बिकास भएको बनाउने लक्ष राखेको छ । कार्यक्रमले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार लगायतका उपल्लो तहबाट प्राप्त निर्देशन र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष बनाएको छ । जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने र रोजगारी बढ्ने काममा लगानी केन्द्रीत गर्ने कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । ‘तमानखोला बिकासको आधार,शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार’भन्ने नारालाई अगाडि सारिएको छ ।
शिक्षामा पछाडि परेकोले लगानीको प्राथमिकतामा पूर्वाधार पछि शिक्षालाईनै राखिएको छ । विद्यालयले अनुदान प्राप्त गर्नलाई शिक्षा ऐन नियमावलीले गरेको व्यवस्थामा रहेर करार शिक्षक राखि प्रारिश्रमिक एकरुपता गरिने उल्लेख छ ।
कक्षा १ देखी ५ सम्मको लागी कम्तीमा शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्र्ने मासिक प्रारिश्रमिक रु १२ हजार ५सय, कक्षा १ देखी ८ सम्मको लागी कम्तिमा सम्बन्धीत विषयगत शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने मासिक प्रारिश्रमिक रु. १५ हजार दिने तथा कक्षा १ देखी १२ सम्मका लागि कम्तीमा सम्वन्धीत विषयगत शैक्षिक योग्यता वि.एड. वा सो सरह हुनुपर्ने र त्यसका लागि रु.२३ हजार ५सय दिने घोषणा गरिएको छ । यस अघि यहाँका ८ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागूगर्न १५ हजार रुपैयाँ तलब दिनेगरी एकएक जना शिक्षक दरबन्दी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराईसकेको थियो । ‘स्वास्थ्यनै जीवन, स्वास्थ्यनै धन’ भन्ने नारालाई उजागर गर्दै सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष समेत राखिएको छ । त्यसकालागि स्वास्थयमा जनताको पहुँच बिस्तारगर्ने भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि १० लाख भन्दामाथिका काममा ईविडिङ लागू गर्ने, कृषि, पशुपालन र पर्यटन बिकासकालागि काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको हो ।
कार्यक्रम सहित आएको बजेटमा १७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो मध्ये वित्तिय सामानिकरण अनुदात निशर्त र सशर्त तर्फ ११ करोड ८५ लाख, निशर्त तर्फ १ करोड ११ लाख र आन्तरिक आय तर्फ १५ लाख राजश्व संकलनगर्ने लक्ष राखिएको छ । संघिय सरकारबाट ४ करोड २९ लाख र प्रदेश सरकारबाट ८ लाख ६२हजार रुपैयाँ आउने कार्यक्रम सहितको बजेट बनाइएको हो । यो बजेट प¥र्याप्त नभएपनि भरपुर सदुपयोग गरेर काम गर्ने समेत बुढाले बताए ।